Ogaden News Agency (ONA) – Ciidanka Itobiya oo ku laayay dad shacab ah meel Galaalshe u dhow
Ciidanka Itobiya oy wehliyaan maxaysato Hawaarin ah (Liyu Police) ayaa shalay oy taariikhdu ahayd 21ka May 2013 ku laayay toban qof oo ahaa qoys beeralay ah meel u dhow magaalada Galaalshe. Ujeedada dadkaa shacabka ah loo laayay ayaa lagu tilmaamay inay tahay si loo argagxiyo dadka beeralayda ah ee deegaankaa, ka dib markii ay ka goosteen 70 askari cutub Hawaarinta ah oo daganaa halkaa.
Ciidamada Itobiya ayaa dadka shacabka ah ku handaday inay laynayaan haday soo sheegi waayaan meesha ay galaan dhalinayarada ka goosanaya maxaysata Hawaarinta.
Dadkan shacabka ah ee goobtaa lagu gumaaday ayaa 7ba ka mid ah la isku wada xidhay ka dibna dadka hortooda lagu toogtay, meesha 3exdii kale intay la tageen muddo ka dib laha helay maydkooda meel 3ex mile u jirta tuulada.
Waxaan ogsoonahay in agagarka Galaalshe ay ciidamada Itobiya iyo maxaysatada Hawaarinta la socota dhowr jeer oo hore dad shacab ah ku xasuuqeen taasoo ay diiwaan galiyeen Haya’adaha Xuquuqda Aadanaha sida naxarisidarada ah ee dadka shacabka ah ay u laynayaan.
Maxaysatada Hawaarinta (Liyu Police) ayaa dad shacab ah oo kor u dhaafaya 300 xasuuqay sanadkan bilowga ah ee 2013da, waxayna Itobiya ku maalgalisaa Hawaarinta mucaawanada ay siiyaan dawladaha deeqda bixiya. (Akhri Halkan).
Magacyada 7ba ka mid ah dadkii halkaa lagu xasuuqay oon jelnay magacyadooda hoosta ka akhri, waxaanan rajaynaynaa 3exda hadhay inaan helno goordhow.
Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya waxay canbaareynayasaa fal-dambiyeedkaa bahalnimada ah ee dadka shacabka ah lagu laayay, waxayna ka cosanaysaa Bulshada caalamka in Itobiya lagula xisaabtamo Xadgudubka ay u gaysanayaan Xuquuqul Insaanka shacabka Ogadenya, waxayna balan qaadayaan in cadaaladda ay mudan yihiin lala tiigsan doono ciidankii falkaa fuliyay.
Magacyada dadka la laayay :